09/25/12 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Tuesday, September 25, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ပထမဆုံးအမေရိကန်GE ကုမ္မဏီထုတ် ခေတ်မှီဂျက်လေယာဉ်(၂)စီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်မည်။ အမေရိကန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူဒါဏ်ခတ်မှုလျော့ပေါ့ပေးလိုက်ပြီးနောက် အမေရိကန်ကုမ္မဏီကြီး တခုဖြစ် သည့် GE ကုမ္မဏီမှမြန်မာနိုင်ငံသို့ စတင်ရင် နှီးမြုတ်နှံရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ GE ကုမ္မဏီ၏ ယူနစ်တခုဖြစ်သော မြို့ပြဆိုင်လေကြောင်းထုတ်လုပ်မှုလီမိတက် (GECAS) မှ မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းအတွက် ခေတ်မှီဂျက်လေယာဉ် Embraer E190 (၂)စီးကို ရောင်းချခဲ့သည်။ အဆိုပါလေယာဉ်( ၂)စီးကို လာမည့် နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်္ဘာလတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပိုဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း GECAS ဥက္ကဌ Norman C.T. Liu ကကြေညာခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် နှစ်ပေါင်း( ၄၉)ကြာစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်တွင် အမေရိကန်ကုမ္မဏီကြီးတခု၏ အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ လေယာဉ်ငှားရမ်း ရောင်းချမှုမှာပထမဆုံးဖြစ်သည်။ GE ကုမ္မဏီသည် ပြီးခဲ့သည့်ဂျူလိုင်လအတွင်းက မြန်မာ့အရောင်း ကိုယ်စားလှယ် တဦးမှတဆင့် ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ(၂)ရုံသို့ ခေတ်မှီဓါတ်မှန်ရိုက်ကရိယာများနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများရောင်းချဖို့ သတော တူညီချက်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ GE ကုမ္မဏီအနေဖြင့် အရပ်ဖက်သုံး စက်မှုပစ္စည်းမျိုးစုံကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရောင်းချခွင့် ရှိသော်လည်းစစ်တပ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအသုံးပြု ပစ္စည်းများကို အမေရိကန်ဥပဒေအရ ပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်သည်။ Embraer E190 ခေတ်မှီဂျက်လေယာဉ်ကို မတ်လ၁၂ရက်၊၂၀၀၄ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးပျံသန်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်တော် များတွင်အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်သည်။ လေယာဉ်အင်ဂျင်ကို GE အင်ဂျင် (၂)လုံးတပ်ဆင်ထားပြီး တောက်လျောက် (၄၄၄၈) ကီလိုမီတာပျံသန်းနိုင်သည်။ လေယာဉ်တွင် စီးပွားရေးပထမတန်းထိုင်ခုံ(၉)ခုံနှင့် ရိုးရိုးတန်း ထိုင်ခုံ (၈၈)ခုံပါရှိသည်။ Embraer E190 ဂျက်လေယာဉ်တစီး၏ တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ ၁.၁ဘီလျံ (၂၀၀၆) ဖြင့်ရောင်းချ သည်။
Posted by drmyochit Tuesday, September 25, 2012, under ကာတွန်းများ | No comments
Posted by drmyochit Tuesday, September 25, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဒီနေ့ကငါအတွက်နောက်ဆုံးနေ့လားဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ နေခဲ့ရတာပါ...
လူတွေကပြောတယ် ဒီလောက်ကြောက်ရွံ့နေလဲ စစ်သားမလုပ်နဲ့တဲ့
ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့စစ်သားလဲ လူပါပဲ..
ကြောက်ရွံ့တတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် တိုက်ခိုက်ချင်လို့ စစ်သားဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ.. ကျနော်တို့စစ်သားလဲ လူပါပဲ. ချစ်တတ်ပါတယ် အထီးကျန်တတ်ပါတယ်... ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနားမှာပဲ နေချင်ခဲ့တာပါ...
ညစဉ်ညတိုင်း ဘုရားရှိခိုးတိုင်း ဆုတောင်းမိတာက အသက်အန္တာရယ်က လွတ်ကင်းဖို့ပါ...
ကျနော်တို့ စစ်သားမှာလဲ ၁၅၀၀တွေ ၅၂၈တွေရှိပါသေးတယ်... အရပ်သားတွေလိုပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေချင်သေးလို့ပါ...
Senior က ရှေ့ဆက်မယ် ပြောလိုက်တိုင်း..
ကျနော်တို့ရင်ထဲမှာ ပူပန်းမှုတွေ ရှိနေစမြဲပါ...
သေနပ်ကိုကိုင်ပြီး ဒီစစ်ပွဲတွေပြီးဖို့ ဘယ်လောက်တောင်တိုက်ခိုက်ရအုံးမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပါ...
သေနပ်သံတွေကြားလိုက်တိုင်း ဗုံးခွဲသံတွေကြားလိုက်တိုင်း ကျနော်တို့ရဲ့ တပ်တူညီအကိုတွေ သွေးတွေ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ လဲကျသွားတိုင်း...
ရင်ထဲစို့နင့်လို့ပါ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ချိန်ဆိုတာတောင် မရှိခဲ့ပါဘူး...
တိုင်းပြည်အတွက် ပစ်ခက်ရင်း တိုက်ပွဲကျလို့ ကျသွားမှန်းတောင်မသိခဲ့ပါဘူး.... ငါအလှည့်ဘယ်တော့လဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ဆက်တိုက်ခိုက်နေဆဲပါ...
ကိုယ်ချစ်သူ ကိုယ်သား ပြန်ပါလာလို့ ပျော်နေရတဲ့ မိသားစုတွေအပျော်ကို ခင်ဗျားတို့ နားမလည်နိုင်သလို...
ကိုယ်ချစ်သူ ကိုယ်သား ပြန်ပါမလာလို့ ငိုကြွေးနေရတဲ့ မိသားစုတွေရဲ့ ရင်ထဲက ခံစားမှုတွေကိုလဲ ခင်ဗျားတို့သိမှာမဟုတ်ဘူး...
စစ်သားတယောက်ရဲ့ မျက်ရည်တွေ.. စစ်သားတယောက်ရဲ့ မိသားစု မျက်ရည်တွေ... စစ်သားတယောက်ရဲ့ သွေးတွေ... စစ်သားတယောက်ရဲ့ ဒဏ်ရာတွေ... စစ်သားတယောက်ရဲ့ ရင်ထဲကစေတနာတွေ... ခင်ဗျားတို့တွေ တနေ့တော့ နားလည်လာမှာပါလို့... ကျနောတို့် မျှော်လင့်နေဆဲပါ... ခင်ဗျားတို့ခေါ်တဲ့ ကျနော်တို့ စစ်ခွေးတွေ ကျနော်တို့အပေါ် အကောင်းမမြင်ပေမဲ့.. ကျနော်စစ်သားတွေကတော့ ခင်ဗျားတို့တွေကို ကျနော်တို့အသက်စွန့်ပြီး အကာအကွယ်ပေးနေဆဲပါဗျာ...
ရခိုင်သမိုင်းကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ အသေးစိတ် သုတေသနပြု လေ့လာသူ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား သမိုင်းပညာရှင် Dr Jacques Leider က ရိုဟင်ဂျာမှာ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဟု ပြောဆို...
Posted by drmyochit Tuesday, September 25, 2012, under သတင်းများ | No comments
From : ချစ်ကိုကို
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ concept မရှိပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ မတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ သူတို့ဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားပါ လို့ ကြွေးကြော်လို့တော့ ရတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို အော်နေတာက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်မှာ မျိုးဆက်တစ်ခုမက နေထိုင်လာကြတဲ့ မူစလင်တွေပါ လို့ ပြောရင်တော့ ငြင်းဖို့ခက်ပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဝေါဟာရ တစ်ခုပါ။ ရှေးဟောင်းစကားလုံး တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်းရောက်မှသာ ဒါကို အသုံးပြုပြီးတော့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းစဉ်တပ်နိုင်ဖို့ အတွက် တောင်းဆိုနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်အထိတော့ သူတို့အားလုံး (ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက မူစလင်တွေ အားလုံး) အနေနဲ့ အဲဒီ နိုင်ငံရေး ခေါင်းစဉ်တစ်ခု အောက်မှာ အကျုံးဝင်ဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ရောက်ခဲ့တုန်းက ရခိုင်ပြည်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပြောင်းရွှေ့လာတယ် ဆိုတဲ့ မူစလင်တွေကို မေးကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ရခိုင်ပြည်က လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလား.. လို့။ သူတို့က ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရခိုင်ပြည်မှာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ မူစလင်တွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စတေကာ ကပ်ပေးလို့ မရပါဘူး.. လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရိုဟင်ဟူသည်မှာ (China ကို တရုတ်ဟု မြန်မာတို့က ခေါ်သကဲ့သို့) ရခိုင်ပြည်ကို ရိုဟင် ဟု ဘင်္ဂလီများက ဘင်္ဂလီဘာသာဖြင့် ရှေးခေတ်က ခေါ်ဆိုကြခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ဆင့်ပွား ဝေါဟာရဖြစ်သော ရိုဟင်ဂျာမှာ ရခိုင်ပြည်သားဟု အဓိပ္ပါယ်ရကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဝေါဟာရမှာ ရခိုင်ပြည်သား သို့မဟုတ် ရခိုင်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းကာလမှသာ ရခိုင်ပြည်သို့ ဘင်္ဂလားမှ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူ ဘင်္ဂလီများနှင့် သက်ဆိုင်မှု မရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ၁၉၅၀ နောက်ပိုင်းတွင်မှ အဆိုပါ လူမသိ သူမသိသော ရှေးဟောင်း ဘင်္ဂလီ ဝေါဟာရကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘင်္ဂလီ ပညာတတ်များက နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ကာ လှည့်စား အသုံးပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ရိုဟင်ဂျင်လူမျိုးဟူသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးသစ် နိုင်ငံရေး ကစားကွက် တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်...
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးဌာနများ ၀န်ထမ်းလစာပေးရန် ဘတ်ဂျက် မရှိဖြစ်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့တွင် ၀န်ကြီး ဌာနများရှိ ၀န်ထမ်းများကို လစာပေးရန် ဘတ်ဂျက်ငွေ မရှိ ဖြစ်နေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။“ ရခိုင်အစိုးရက ခုလို ၀န်ထမ်းတွေ လစာအတွက် ဘတ်ဂျက် မရှိ ဖြစ်နေတာကို မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်မှာ တင်ပြပါတယ်” ဟု စစ်တွေ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မြကျော်က ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကို မနေ့က ပြန်လည် စတင်ခဲ့ရာ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် အစီအစဉ်တွင် ရခိုင် အစိုးရက ထိုသို့ တင်ပြသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ “ ဒါကြောင့် ရခိုင် ပြည်နယ် ၀န်ကြီးဌာန (၁၀) ခုအတွက် သူတို့က ဘတ်ဂျက်ငွေဖြည့်စွက်ပေးဖို့ တောင်းခံပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဧပြီလက ကျွန်တော်တို့ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ဘတ်ဂျပ်နဲ့ မလုံလောက်ဆိုပြီး ထပ်တောင်းခံတာပါ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ၀န်ကြီးဌာ ၁၀ ခု ထဲတွင် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ၊ အခွန် နှင့်ဘဏ္ဍာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူးရေး၊ သစ်တောနှင့် သတ္တု၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မူ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူမူရေး ၀န်ကြီးဌာနတို့ပါဝင်သည်။
ယခု ပြုလုပ်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပထမအကြိမ် စတုတ္ထပုံ မှန်အစည်း အဝေးဖြစ်သည်။အစည်း အဝေးကို နံနက် ၁၀ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြည်နယ်လွတ်တော် ဥက္ကဌမှ မိန်းခွန်း စကားပြောကြားပြီးနောက် ရခိုင် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်မှ တနှစ်တာလုပ်ငန်း အစီရင် ခံစာကို ဖတ်ပြခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ၀န်ကြီးဌာများတွင် ဘတ်ဂျက် လိုငွေပြခြင်းမှာ ၀န်ကြီးဌာနများ အနေဖြင့် မိမိ ၀န်ကြီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းများ အပေါ် အာရုံ စူးစိုက်မူ နည်းပြီး တချို့ ၀န်ကြီးဌာနများသည် မိမိဝန်ကြီးဌာနတွင် ၀န်ထမ်းမည်မျှ ရှိသည်ကိုပင် မသိရှိကြောင်း အတွင်းက လာသော သတင်းများ အရသိရသည်။ ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် လွတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် မေးခွန်းလေးခုကို အဆိုတင်သွင်းခဲ့ကာ ပုံမှန်အတိုင်း ပြီးဆုံးခဲ့သော်လည်း ယနေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် လွှတ်တော်တွင် အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးမူများ ရှိနိုင်သည့် ကဏ္ဍ များပါဝင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ကျနော်တို့ ခေတ်သစ် ကမ္ဘာမှာ လူမှုကွန် ယက်နှင့် တကမ္ဘာ လုံး အတိုင်းအတာ လူသားအချင်းချင်း ချိတ်ဆက် စကားပြောနေချိန်မှာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံတနေရာမှာတော့ ကလေးလေးတွေကို အရှင်လတ်လတ်မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုလ်တဲ့ ဓလေ့ရှိနေပါသေးကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက်ရချိန် စိတ်ထဲမှာ မသက်မသာ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အသက် ခြောက်လမှ ဆယ်နှစ် အရွယ် ခလေးလေးတွေကို နေကြတ်ခြင်းကို ကုစားဖို့ ဆိုပြီး အရှင်လတ်လတ်မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုလ်လိုက်ပါတယ်။ ခလေးမိဘတွေရဲ့ လက်ထဲက မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ မျက်ရည်ခန်းသွားတဲ့အထိ သနားစရာ အဖြစ်လေးကို မိဘတွေက လွဲပြီး သနားသော အကြည့်နဲ့ ကြည့်နေသူပင် မရှိကြောင်း ဖတ်လိုက်ရချိန်မှာ လူသားအချင်းချင်းကြား ထားအပ်တဲ့ မေတ္တာတရားသည် အယူသီးမှု ၏ နောက်ကွယ်တွင် ကျန်နေနိုင်သလား ဆိုတာကိုပါ စဉ်းစားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလို အဖြစ်ဟာ စာပေ ဗဟုသုတ ခေါင်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ် ဆိုပြီးတော့လဲ မှတ်ချက်ပြုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် စာပေ၊ ဗဟုသုတ နှင့် မေတ္တာတရား ဆက်စပ်မှု ရှိနိုင်ပါသလား။ စာပေ ဗဟုသုတ ပေါကြွယ်ဝသော လူ့အသိုင်းအ၀န်းများတွင်လဲ မေတ္တာတရား ခေါင်းပါးခြင်းများ တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော်.... မသိခြင်းထက် သိခြင်းသည် လူတွေကို ဆင်ခြင်းတုံတရား ပိုပေးနိုင်ကြောင်း ကိုတော့ သတိထားမိလိုက်ပါသည်။ အခုလိုအဖြစ်မျိုး ဆက်မဖြစ်ရလေအောင် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက အစဉ်တစိုက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ကို ဥပဒေ နဲ့ အကာအကွယ်ပေးဖို့ ဆော်သြနေကြပါတယ်။ ဆက်ပြီး ခလေးလေးများ မေတ္တာတရားရဲ့ အရိပ်အာဝါသ အောက်မှာ ရှင်သန်နိုင်ပါစေ လို့ပဲ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးက လူ့အသိုင်းအ၀န်းကြား မေတ္တာ ဂရုဏာတရား ထွန်းကားဖို့သာ ဖို့ပါ။
နိုင်ငံရေး အရှုပ်တော်ပုံကြောင့် တရုတ် ရဲချုပ်ဟောင်း ထောင် ၁၅နှစ်ကျ
တရုတ်နိုင်ငံက ရဲချုပ်ဟောင်းတဦးကို တရားရုံးကနေ ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အရှုပ်တော်ပုံ တခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ထိပ်တန်းနိုင်ငံရေး သများ Bo Xilai ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် အဲဒီဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ဆက်စပ် နေတဲ့ ထိပ်တန်းရဲအရာရှိဟောင်းကို အခုလို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာပါ။ ရဲချုပ်ဟောင်း Wang Lijun အပေါ် တခြားနိုင်ငံတခုမှာ ခိုလှုံမှု၊ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ လာဘ်စားမှု၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဥပဒေကို အသုံးချမှု တွေအတွက် အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီး စီရင်ခဲ့တယ်လို့ ဆင်ဟွာက ဖော်ပြပါတယ်။ Wang ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ချန်ဒူးမြို့က အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးထဲ ထွက်ပြေး ခိုလှုံခဲ့ပါတယ်။ Bo Xilai ရဲ့ ဇနီး ဖြစ်သူ Gu Kailai ဟာ စီးပွားရေးကိစ္စ အငြင်းပွားတာကြောင့် ဗြိတိသျှစီးပွားရေးသမားတဦးကို သတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှာ Wang က အမေရိကန်သံတမန်တွေကို ပြောခဲ့တာပါ။ Gu Kailai ကို မကြာသေးခင်ကပဲ ဆိုင်းငံ့သေဒဏ် အပြစ်ပေးထားပြီး Bo Xilai ကိုတော့ ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ပြင်ပသတင်းမီဒီယာတွေ ၀င်ခွင့်မပြုဘဲ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နဲ့ စီစဉ်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်ကြာ တရားစစ်ဆေးမှုအတွင်းမှာ Wang က သူ့ အပေါ်စွဲချက်တွေကို မငြင်းခဲ့ဘူးလို့ ဆင်ဟွာက ပြောပါတယ်။
မိခင်တဦးအနေနဲ့ ကိုယ့်ရင်က လွယ်မွေးထားတဲ့ သားဖြစ်သူကို အိမ်ထဲမှာဘဲ နှစ်ပေါင်း ၂၁ နှစ်ကျော် သံကြိုးနဲ့ ခတ်ထားတယ်ဆိုရင် သာမန်အားဖြင့် မယုံနိုင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်း ကျန်စုပြည်နယ်၊ နန်ကျင်းမှာ တကယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ အသက် ၇၁ နှစ်ရှိ ချန်ကြုဖန် ဆို တဲ့ မိခင်က အသက် ၃၇ နှစ်ရှိ သားဖြစ်သူ ဟောင် ချန်လင်းကို သူ ၁၆ နှစ်သား ကတည်းက သံကြိုးခတ်ပြီး အိမ်ထဲမှာ ထားခဲ့ပါတယ်လို့ မေးလ် အွန်လိုင်း သတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုလို လုပ်ထားရတာလည်း မိခင်တယောက်အနေနဲ့ ရင်နာနာနဲ့ လုပ်ရတာပါတဲ့။ တကယ်လို့ ချန်လင်းကို သံကြိုးတွေနဲ့ မခတ်ထားရင် သူက အိမ်နီးချင်းတွေကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကြမ်းတော့တာပါဘဲတဲ့။ ချန်လင်းရဲ့လက်ညာဖက် လက်ကောက်ဝတ်မှာ သံကြိုးတန်းလန်းနဲ့ နေခဲ့ရတာ နှစ်တွေ ကြာလွန်း လာတာကြောင့် အသာမာတွေကလည်း တက်နေတာပေါ့။ အမေဖြစ်တဲ့သူက သူ့ သားဖြစ်သူ ချန်လန်း အနေနဲ့ အခုလို စိတ်ဝေဒနာ ခံစားရတာ အသက် ၁၆ နှစ်၊ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် ချစ်သူရည်စားနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့အပြီး အသည်းကွဲဝေဒနာတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ အများကြီး ဖြစ်တာက စခဲ့တာလို့ ယုံကြည် နေပါတယ်။ ချန်လင်းမိသားစုက ပြောတာကတော့ သူ့ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲတဲ့နေ့က ချန်လင်းရဲ့ ကောင်မလေးက အနီရောင် ၀တ်ခဲ့တာ ကြောင့် ချန်လင်းဟာ အနီရောင်မြင်တာနဲ့ ဒေါသတွေ ထွက်ပြီး ကြမ်းတော့တာပါဘဲ တဲ့။ ပြောရရင် အချစ်ကြောင့် ရူးခဲ့ရတာပါ။ ချန်လင်းရဲ့ မိခင်က ပြောတာကတော့ သာမန် လယ်သမား မိသားစုဖြစ်တာကြောင့် စိတ္တဇဆေးရုံကို ပို့တာတို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာ ပြပြီး ကုသတာမျိုးလည်း မလုပ်ဖူးပါဘူးတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ အခု လို နှစ်တွေ ကြာလာခဲ့တော့တာပါဘဲ။ “ကျမ လုပ်နိုင်တာ အားလုံးကတော့ သူ့ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးမယ်။ အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ထားမယ်။ အစာကျွေးမယ်” လို့ ချန်လင်းရဲ့ မိခင်က ပြောတာပါ။ သံကြိုးတန်းလန်းနဲ့ သားဖြစ်သူကို မြင်တိုင်း ရင်ထဲ မချိတင်ကဲခံစားရပေမယ့် ပိုက်ဆံ မရှိတာကြောင့် လည်း ဆေးမကုနိုင်ခဲ့ဘူး၊ သားဖြစ်သူကို နေကောင်းစေချင်တာ သူ့ရင်ထဲက ဆန္ဒပဲလို့ သူက ဆက်ပြော ထားပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်တဲ့သူက တခါတလေ သားဖြစ်သူ ချန်လင်းကို သံကြိုးဖြုတ်ပေးလိုက်ရင် ရွာထဲလျှောက်သွားပြီး ကြမ်းတော့တာပါဘဲတဲ့။ အထူးသဖြင့် အ၀တ်အစား အနီ ရောင် ၀တ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုရင် ဒေါသတကြီးနဲ့ ရန်လိုပြီး ကိုယ်ထိ လက်ရောက် အနာတရဖြစ်အောင် လုပ်တာတွေကို မိခင်ဖြစ်သူက ပြောပြပါ တယ်။ မိခင် ဖြစ်သူ အနေနဲ့ တခါ တလေ သားဖြစ်သူအပေါ် သနားစိတ်နဲ့ သံကြိုးဖြေ လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အတွေ့ အကြုံကို ပြောပြတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ သားဖြစ်သူကို ပြန်ဖမ်း၊ သံကြိုးခတ်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ထားရင်းနဲ့ ၂၁ နှစ်ကျော် လာခဲ့တော့ တာပါဘဲတဲ့။
စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ဖိလစ်ပိုင်ပင် လယ်ပြင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း JELAWAT(18W-ဖိလစ်ပိုင် အမည်ဖြင့် LAWIN) သည် အဆင့်-၅ စူပါတိုင်မုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာပြီးး၊ မနီလာမြို့တော် အရှေ့ဘက် မိုင် ၄၆၀ ခန့်၊ အိုကီနာဝါကျွန်း၏ တောင်ဘက်စူးစူး မိုင် ၇၂၀ ခန့် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုလျှက်ရှိပါသည်။
အဆင့်-၅ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး JELAWAT သည် မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိနေပြီး၊ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်း တစ်နာရီ ၃၁၅ ကီလိုမီတာ(၁၇၀ နော်တီကယ်မိုင်နှုန်း)ရှိကာ၊ မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် ၄၂ ပေရှိကြောင်း သိရပါသည်။ မုန်တိုင်း အရွယ်အစားမှာ အချင်း ၄၂၀ နော်တီကယ်မိုင်(၇၇၅ ကီလိုမီတာ)ရှိသော ကြီးမားသည့် အရွယ်အစား ဖြစ်လာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ WUND မှ မုန်တိုင်း လမ်းကြောင်း ခန့်မှန်းချက် ပြပုံတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်း တစ်နာရီ မိုင် ၁၆၀ မှ ၁၉၅ မိုင်အထိ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။
JELAWAT သည် အိုကီနာဝါကျွန်းအား ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းနှင့် ဂျပန်ပင်လယ်ပြင်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း WUND ကနဦး လမ်းကြောင်းခန့်မှန်းချက်များတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, September 25, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်နေ့လျှင် လူဦးရေ ၂၃ဦးခန့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်ခံနေ ရကြောင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ UNAIDS ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းတွက် ချက်ထားသည့် ''HIV Estimates and Projections Asian Epidemiological Model Myanmar 2010-2015 ''တွင် ဖော်ပြထားချက်များအရ သိရသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်ခံနေရသူ ခန့်မှန်းဦးရေ နှစ်သိန်းဝန်းကျင်ခန့် ရှိနေပြီး ပိုးရှိသူများအနက်မှ လူဦးရေတစ်သိန်းနှစ်သောင်းကျော်မှာ အေအာတီဆေးဝါး လိုအပ်နေသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၂ခုနှစ် ဇွန်လအထိ ရရှိထားသည့် စာရင်းများအရ ဆေးဝါးလိုအပ်သူများအနက် လူဦးရေ ၄၄၆၆၁ဦးကို အေအာတီ ဆေးဝါးပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှစ်သောင်းကျော်မှာ အေအာတီဆေးဝါးရရှိရန် လိုအပ်နေသူများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ''လက်ရှိ အေအာတီဆေးလို အပ်နေပြီး မရသေး တဲ့သူက ၆၀ရာ ခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ ဒီနှစ်ကုန်ဆိုရင်တော့ အခုရနေတဲ့လူဦးရေထက် တစ်သောင်းကျော်လောက်တိုးပြီး ပေးနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆေးလိုအပ်နေတဲ့ သူတွေဆေးရဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ Global Fund နဲ့ အမေရိကန်ပြည်သူတွေက ပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ စီစဉ်နေပြီး ရန်ပုံငွေတွေရလာရင် ဒီလူတွေအတွက် ဆေးတွေရလာမှာပါ။
မြန်မာမှာ ပိုးကူးစက်ခံရနှုန်းက တစ်ရက်ကို ၂၃ယောက်နှုန်း ကူးစက် ခံနေရပြီး လူဦးရေ ၅၀ ၀န်းကျင်လောက် သေဆုံးနေတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ သေဆုံးတဲ့နှုန်းက ကူးစက်ခံရတဲ့နှုန်းထက် ပိုနေတာကို တွေ့ရပါတယ် '' ဟု Marie Stopes International မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ စစ်နိုင်က ပြောပြခဲ့သည်။ လက်ရှိ ပြင်ပဆေးခန်းများတွင် အေအာတီဆေး ၀ယ်သောက်နေသူဦးရေ တစ်သောင်းနှင့်နှစ်သောင်းကြားရှိမည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းထားကြကြောင်းနှင့် အေအာတီဆေးအတွက် တစ်ဦးလျှင် တစ်လကုန်ကျစရိတ်မှာ အနည်းဆုံး ကျပ်နှစ်သောင်းကျော် သုံးသောင်းကြားရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့က အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Eric Goosby နှင့် အဖွဲ့သည် HIV နှင့်ပတ်သက်၍ တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ လိုအပ်ချက်များ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးရမည့် ကိစ္စရပ်များအား ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်အခြေစိုက် ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားချက်များအရ သိရသည်။ Eric Goosby သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် PEPFAR အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ HIV ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အနေဖြင့် ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခြားတာဝန်ရှိသူများနှင့် HIV နှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ယင်းအဖွဲ့သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့တွင် ဖြစ်ပွားနေသော HIV/AIDS ရောဂါအား တိုက်ဖျက်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ HIV/AIDS ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသူ များအား အေအာတီဆေးဝါး ထောက်ပံ့မှု အများဆုံးပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ ရင်ဂမြို့နယ် ဒတ်မာ ရာဒေသ၌ ၁၂နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတဦး ကိုအလိုမတူဘဲ မုဒိမ်းပြုကျင့် ဖြစ်ရပ်တခုပေါ် ပေါက်ခဲ့သည်ဟု ၄င်းတို့၏နိုင်ငံပိုင် သတင်းတွင်ဖေါ်ပြထားသည်။ “အိမ်နားက ဟင်ခင်းကို ဟင်းခူးဖို့သွားတယ်။ အဲဒါကို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး ဒါခီးယာရွာက Sahid Ullah ဆိုတဲ့လူဟာ အဲဒီမိန့် ကလေးကို အနီးအနား တောထဲကိုအားဓမ္မခေါ်ယူပြီး မုဒိမ်းပြုကျင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟုမိသားစု အပြောကိုကိုးကားပြီး ရဲအရာရှိက ဒေသ သတင်း ထောက်အားပြောသည်။ ပြုကျင့်ခံရသူ မိသားစုဘက်မှ အဆိုပါ အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရင်ဂမြို့ရဲဌာနတွင် လွန်ခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ညနေပိုင်က အမှုဖွင့်တိုင် ကြား ထားသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် အဆိုပါမှုမှာ အမှုခင်းဖြစ်ပြီးနောက် ပျောက်ကွယ်နေသည့်အတွက် တရားခံကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီးရန် ကြိုးစားနေသည် ဟုဆိုသည်။
From (ရွှေမြန်မာမီဒီယာဂရု )
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ လူကြုံထည့်ပေးလိုက် ပါရစေဆိုပြီး လာအကူအညီတောင်းတဲ့ လူတွေနဲ့ တွေ့ရင် အားနာမနေဘဲ ငြင်းလိုက်တာ ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်အကင်းဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့် အသိတစ်ယောက် အားနာပြီး လမ်းကြုံ သယ်သွားပေးမိတာ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့သူက လက်ဖက်တွေ၊ ငပိကြော်တွေလို့ ပြောပြီး ထည့်ပေး လိုက်ပေမယ့် စင်္ကာပူလေဆိပ်ရောက်လို့ စစ်တော့မှ ဆေးရွက်ကြီးတွေ ၀ှက်ပြီး ထည့်ပေးလိုက်တာ သွားမိပါတယ်။
ကျွန်တော့အသိလည်း လေဆိပ်မှာတင် ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ချက်ချင်း လက်ထိပ် ခတ်ခံရပြီး ရဲစခန်းရောက်သွားပါတယ်။ သူက ဟိုမှာ ၁၅ နှစ်လောက် အနေကြာလာပြီး၊ ဟိုမှာလည်း ပတ်ပတ်နပ်နပ် လိုက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ မြန်မာတွေရယ်၊ သူ့ကုမ္ပဏီရယ် ရှိနေလို့သာ ဂျေးထဲ မရောက်ခင်လေး လက်မတင်လေး ပြန်ထွက် လာနိုင်တာပါ။
စင်ကာပူအထာလည်း မသိ၊ စင်ကာပူနဲ့လည်း စိမ်းသေးတဲ့ လူသစ်လေးတွေ အဲ့လိုများ ခံလိုက်ရရင် ဘ၀ပါ ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ လူကြုံထည့်ပေးလိုက်ပါရစေဆိုလို့ ကိုယ်က စေတနာနဲ့ သယ်သွားပေးတာ ဆိုပေမယ့် အထဲမှာ ဆေးရွက်ကြီးလိုဟာတွေ ၀ှက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ တိုးရင် ကိုယ်က စင်ကာပူကို ဆေးရွက်ကြီး တရားမ၀င် တင်သွင်းမှုနဲ့ သေလောက်အောင် ပြဿနာတက်မယ်၊ ထောင်ပါ ကျနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားကြပါ။ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ အဲ့လို လူကြုံထည့်ပေးလိုက်ပါရစေဆိုပြီး လုပ်စားနေတဲ့ ရုပ်ရည်သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် သားသားနားနား အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရှိတယ်လို့လည်း ကျွန်တော့ အသိက ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်က သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း များအဆုံး ထိုအမျိုးသမီးကို သိကြတယ်လို့လည်း ကျွန်တော့အသိက ဆိုပါတယ်။ သူ့ကိုလည်းအဲ့အမျိုးသမီးကပဲ အကူအညီတောင်းပြီး ထည့်ပေးလိုက်ရာက ပြဿနာဖြစ်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခုထိလည်း အဲ့လို လုပ်နေ တုန်းပါပဲ။
ထိုအမျိုးသမီးကို ရဲစခန်းမှာ တိုင်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေအရ ဆေးရွက်ကြီး ထည့်ပေးလိုက်တာကို တရားမ၀င်လုပ်ရပ်အဖြစ် အရေးယူလို့ မရနိုင်ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် စင်ကာပူသွားမယ့်လူများကသာ ကိုယ့်အန္တရာယ်ကိုယ်ကြည့်ပြီး ရှောင်ရှားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် ဘက်မှာက ဆေးရွက်ကြီးဟာ တရားမ၀င်ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက် သူ့ကို ဘယ်လိုမှ အရေးယူလို့ မရနိုင်ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ သူ ခိုးထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးရွက်ကြီးက လွတ်သွားပြီး ဟိုဘက်မှာ သူနဲ့ ချိတ်ဆက် လာစောင့်တဲ့လူလက်ထဲ ရောက်သွားရင် စင်ကာပူမှာ ဆေးရွက်ကြီးဟာ မှောင်ခိုဈေး အတော် ကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းနိုင်ပါတယ်။ စင်ကာပူ သွားမယ့် လူဟောင်းတွေရော၊ လူသစ်တွေရော သတိထားပါ။ ကျွန်တော့ အသိအပါအ၀င် အခြားသော မြန်မာတွေလည်း အဲ့လို လူကြုံထည့်ပေးပါရစေဆို တာတွေထဲမှာ ဆေးရွက်ကြီးတွေပါလာလို့ စင်ကာပူလေဆိပ်မှာ ဒုက္ခရောက် ကုန်တာ မနည်းဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဟု ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ၏ မိတ်ဆွေက ရေးသားထားပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ ဆောက်လုပ်ဆဲ တံတားတစ်စင်းပြိုကျ နှစ်ဦးသေဆုံး ၁၂ ဦးဒဏ်ရာရ
ဆိုးလ် စက်တင်ဘာ ၂၃
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံ ပါဂျူမြို့ မြောက်ပိုင်း၌ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်က ဆောက်လုပ်ဆဲ တံတားတစ်စင်း ပြိုကျခဲ့ရာ အလုပ်သမား နှစ်ဦး သေဆုံး၍ အခြား ၁၂ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ မီဒီယာ များ၏ ထုတ်ပြန် ကြေညာချက် အရ သိရသည်။
ဖြစ်ပွားပုံမှာ အရှည် ၅၃၉ မီတာ ရှည်လျားသည့် အမ်ဂျင်မြစ်ကူး တံတား၏ အရှည်၅၅ မီတာရှိ တံတား အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုကို အလုပ်သမား များက ဆောက်လုပ်နေစဉ် ပြိုကျခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အလုပ်သမား များသည် အောက်ဘက်ရှိ ကျောက်ဆစ်မြေနှင့် ရွှံ့မြေပေါ်သို့ ပြုတ်ကျခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒဏ်ရာရရှိ သူများအနက် အချို့မှာ စိုးရိမ်ရသည့် အနေအထားတွင် ရှိကြောင်းနှင့် အဆိုပါ တံတား ပြိုကျ ရခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်း စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
စက်တင်ဘာလ(၂၄)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိုင်းအောင်ရွာထဲသို့ဝင်လာသော အစိုးရစစ်ကြောင်းကို KIA မှ လက်နက်ကြီးများနှင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုလက်နက်ကြီးများသည် ဆိုင်းအောင်ရွာတွင်းသို့ ကျရောက် ပေါက်ကွဲကာ ရွာသား(၃)ဦး အပြင်အထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ဖားကန့်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆိုင်းအောင်ရွာမှ ကချင်အဖွားအိုတစ်ဦးမှ KDN သို့ ပြောပြချက်မှာ `` မနေ့ နေ့လည်က KIA တွေက ဗမာစစ်တပ်ကိုလက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခဲ့တယ်။ ဗမာစစ်တပ်က ရွာထဲဝင်လာနေတာဆိုတော့ လက်နက်ကြီးတွေက ရွာထဲကို ကျတာပေါ့၊ ကျတော့ သုံးယောက် ဒဏ်ရာရတယ်၊မောင်ထွေးမြင့်က ခြေထောက်ကျိုးသွားတယ် ၊ အောင်သူကခါးကိုမှန်တယ်၊ နောက်တစ်ယောက် စိုင်းမျိုးဇော်က နောက်ကျောကို မှန်တယ်၊ KIA ကတော့ တော်တော်လွန်နေပါပြီဟယ်´´ ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
KIA ၏ လက်နက်ကြီးဒဏ်ကြောင့် အိမ်တစ်လုံး ပြိုကျခဲ့ပြီး ကလေးများ၊ မိန်းမများ ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒဏ်ရာရသူ(၃)ဦးအား ၂၄-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ရွာသားများ၏ အကူအညီဖြင့် ဖားကန့်ဆေးရုံသို့ ပုိ့ဆောင်ဆေးကုသမှု ခံယူထားဆဲဖြစ်ပြီး အသက်သေဆုံးမှုတော့ မရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပဲခူးမြို့ အကျဉ်းထောင်မှာ ထောင်ကျနေသူ အကျဉ်းသား ဦးလှမိုးကို ထောင်မှူး ဦးကျော်စွာသင်းက ကိုယ်ထိလက်ရောက် ထိုးကြိတ်ခဲ့တဲ့အတွက် အကျဉ်းသားရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ မခင်ကြည်ကြည်ချိုက ပဲခူးထောင် ညွှန်မှူး ဦးနိုင်ဝင်း၊ ဦးစီးအရာရှိ ဦးသိန်းစိုး၊ ထောင်ပိုင် ဦးဝင်းတင်တို့ကို မနေ့မနက်က တွေဆုံ တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ပြည်တွင်းဂျာနယ်တချို့က သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ အကျဉ်းသားရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မခင်ကြည်ကြည်ချိုက RFA ကို ပြောပါတယ်။
"ကျွန်မ မနေ့က သူ့ကို ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ သူ့ပါးမှာ ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတယ်။ ထောင်မှူး ဦးကျော်စွာသင်းက သူ့ကိုပါးသုံးချက်ရိုက်ပြီးတော့ လက်သီးနဲ့ ပါးကိုထိုးတယ်တဲ့။ မနေ့က ရဲမှူးကြီးဆီကို လှမ်းပြီးတော့ အကြောင်းကြားတယ်။
ဒီမနက်ကို ထောင်ညွန်မှူးကြီးနဲ့လည်း သွားတွေ့တယ်။ သူတို့သက်ဆိုင်ရာနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ လုပ်ပေးမယ်ပေါ့။ ကျွန်မက သက်ဆိုင်ရာအသီးသီးကို တိုင်ကြားမယ်ပေါ့။
လိုအပ်ရင်လည်း အမှုဖွင့်မယ်"ထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ပဲခူးထောင် ညွှန်မှူး ဦးနိုင်ဝင်းက အကျဉ်းသား ဦးလှမိုးကို ထောင်မှူး ဦးကျော်စွာသင်းက ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ မိမိတို့ဘက်မှ တာဝန်ပေါ့မှု ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထောင်မှုးကျော်စွာသင်းကို အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးပြီး အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ မခင်ကြည်ကြည်ချိုနဲ့ လိုက်ပါပြီး ထောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အလွတ်သတင်းထောက် ကိုသူရအောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။
"အဓိက ညွန်ကြားရေးမှူးက ဒီအမှုကို ထိထိရောက်ရာက် အရေးယူပေးမယ်။ ဘယ်လိုအရေးယူမှာလဲ၊ ဘယ်တော့ အရေးယူမှာလဲ၊ တကယ်အရေးယူမှု ရှိ မရှိဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အရပ်သားတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲလို့ ကျွန်တော်က မေးတော့ သူရေရေရာရာ မဖြေနိုင်ဘူး။
ဒါကဋ္ဌာနပိုင်းဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်လို့ အရာရှိတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုအရေးယူ တယ်ဆိုတာ အပြင်ကိုထုတ်ပြီး သူတို့ပြောလေ့ ပြောထမရှိဘူးတဲ့။ ယေဘုယျသဘောအားဖြင့် သူတို့စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ အရာရှိ တစ်ယောက်က ဒီလိုအကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကို လက်လွတ်စပယ် ရိုက်တဲ့ ပုတ်တဲ့ကိစ္စကတော့ အပြစ်ရှိတာမှန်ပေမဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့ စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါကျမှသာလျှင် သူ့မှာ အပြစ်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ထိရောက်စွာ အရေးယူမယ် လို့ပဲ ဝေ့ဝိုက်ပြီးတော့ ပြောပါတယ်"
အကျဉ်းသားဦးလှမိုးဟာ ထောင်တွင်းရေသန့်စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့က မိန်းမဆောင်ဖက် ပို့ပေးရမယ့်ရေဗူးတွေ အချိန်မီ မရောက်လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ထောင်မှူး ဦးကျော်စွာသင်းရဲ့ ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်မှုကို ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
မချမ်းဘော ဆန်ပြတ်လတ်လို့အာဟာရချိုတဲ့ သေဆုံး
ကချင်ပြည် ပူတာအိုမှာ ဒီနှစ်အတွင်း ဆန်ရှားပါးပြီး ပြတ်လတ်တဲ့ အထိ ဖြစ်နေလို့ ဒေသခံ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ငှက်ပျောအူ၊ ငှက်ပျော ဖူးတွေနဲ့ အစားထိုး မှီခိုနေရတဲ့အတွက် အာဟာ ရချိုတဲ့ပြီး လူသေဆုံးတဲ့ အထိ ဖြစ်နေပါတယ်။ ပူတာအိုမြို့နယ်၊ မချမ်းဘောမြို့နယ်တွေမှာ ဒီနှစ် အစောပိုင်းလောက်ကစပြီး ဆန်ပြတ် လတ်မှုတွေ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားပြီး ဇူလိုင် လကုန်ပိုင်းက စပြီးတော့ အခုချိန်ထိ ဒေသခံတွေဟာ သစ်သီး သစ်ဥတွေကိုပဲ ရှာဖွေ စားသောက်ရတဲ့အထိ ဆန်ပြတ်လတ် သွားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီလိုဆန်ပြတ်မှုကြောင့် ဆန်ဈေးတအိတ်ကို ကျပ် ၈ သောင်းနဲ့ ၁ သိန်းကြားအထိ မြင့်တက်သွားပြီး နို့ဆီခွက်နဲ့ဝယ်စားရင် ၁ ဗူးကို ကျပ် ၅၀ဝ နဲ့ဝယ်ယူစား သုံးနေကြရပါတယ်။
ဒါကလည်း ငွေကြေးရှိသူတွေအနေနဲ့ပဲ ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ကြတာ ဖြစ်ပြီး တောရွာဒေသက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ငွေကြေး အခက်အခဲတွေ၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အ ခဲတွေကြောင့် တောထဲက အသီးအနှံတွေ ကိုပဲ မှီခိုစားသောက် နေရတယ်၊ ဒီလိုပဲ လနဲ့ချီ လည်ပတ် စားသောက်နေရတဲ့အတွက် သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ ကလေးတွေကိုပိုပြီး ထိခိုက်လာတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်လောက်မှာ မချမ်းဘောက ကလေးငယ် ၂ ယောက် သေဆုံး သွားတယ်လို့ ပူတာအိုမြို့က ဒေသခံ တစ်ယောက်က ဘီဘီစီကို ပြောပြပါတယ်။ ဒီလိုဝမ်းစာအတွက် အခဲအခဲရှိလို့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ အတွက်လည်း ပညာရေးပိုင်းမှာ ထိခိုက်လာတယ်၊ ကျောင်းထွက်ပြီး မိသားစုနဲ့အတူ အသီးအနှံ ရှာထွက်ကြရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီလိုဆန်ရှားပါးမှု ပြဿနာကို ခါတိုင်းနှစ်တွေမှာလဲ ကြုံတွေ့ဖူးပေမယ့် လုံးဝ ပြတ် လတ်သွားတဲ့အထိ မရှိခဲ့ဘူး ၊ ဒီနှစ်မှာ ဒီလိုဆိုးဆိုးရွားရွား ပြတ်လတ်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ မြေနေရာကြောင့် ရာသီဥတုကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီဒေသမှာ တောင်ကုန်းတွေ ကျောက်တောင်တွေပေါများပြီး အအေးပိုင်းဒေ သလဲဖြစ်တဲ့အတွက် စိုက်ပျိုးမှုက သိပ်မအောင်မြင်ဘူး အဲဒါအပြင် ဒီနှစ်မှာ မိုး သည်းထန်မှုကြောင့် စပါးခင်းတွေ ပျက်စီးသွားရတယ်။
နောက်တခြား အကြောင်းရင်းကတော့ နိုင်ငံရေး စစ်ရေးအရကြောင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း ပြတ်တောက် သွားပြီး ဆန်သယ်ယူမှု ပြတ်တောက် သွားတာ ဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီမြို့ခံတယောက်က ပြောပြပါတယ်။ အခုလို ပူတာအိုမြို့တို့ မချမ်းဘောမြို့တို့ကို သွားဖို့ တခုတည်းသောလမ်း ဖြစ်တဲ့ မြစ်ကြီးနား-ဆွမ်ဘရဘွန်လမ်းကြောင်းက တံတားတွေ ပျက်စီးသွား တဲ့အပြင် အစိုးရ စစ်တပ်ဘက် ကလည်း ပိတ်ပင်လိုက်လို့ အခုဆိုရင် ပူတာအိုကို လေယာဉ်နဲ့ပဲ သွားလာကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီဘက်ကဒေသခံတွေဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးမှုနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြတာဖြစ်ပြီး ကုပဏီတွေမှာနေ့စားလိုက်ပြီး ဝင်ငွေရှာကြတယ် ၊ စစ်ရေးပြဿနာ ရှိလာတဲ့ နောက်ပိုင်း ကုမ္ပဏီ တွေကလည်း မရှိတော့လို့ ဝင်ငွေအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်တယ် ၊ အခုချိန်ထိတော့ အဲဒီဘက်က ဒေသခံတွေကို သွားရောက် ကူညီပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တခုမှ မရှိသေးဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
KIA မှအတင်းအဓမ္မ ဖမ်းပြီးသားမယားအဖြစ်ပေါင်းမှုအား ပင်လုံရွာမှသူများမကျေနပ်
KIA အဖွဲ့က မေလ ၆ရက်နေ့က ပင်လုံရွာမှအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီး လူသစ် စုဆောင်း သွားသော မိန်းကလေး ၇ ဦးနဲ့ ယောကျာင်္းလေး ၁၅ ဦးအနက် KIA မှ အမျိုးသမီး ၂ဦးအား အတင်း အဓမ္မမတရားပြုကျင့်ပြီးအိမ်ထောင်ပြုခဲ့တဲ့အတွက် မိုးညှင်း မြို့နယ် ပင်လုံရွာမှလူတွေက မကျေနပ် ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကျန်တဲ့ လူတွေကိုတော့ တပ်သားသစ်အဖြစ် နမ္မတီးရွာနားမှာရှိတဲ့ နန့်ခပ်ခချောင်းဖျားမှာ ရှိတဲ့ KIA ရင်း ၁၁မှာ သင်တန်းပေးနေပြီးသင်တန်းမှူးကတော့ ဗိုလ် စီးနော်လော် လို့သိရပါတယ်။ ဖမ်းသွားတဲ့ အထဲမှ အသက်အရမ်းတဲ့ကလေး ၃ယောက်ကိုတော့ သူတို့မိသားစုတွေကို KIA မှ ဖုန်းဆက်ပြီး ငွေ ၅သိန်းနဲ့လာရွေးရန်ပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ KIA အဖွဲ့၏လုပ်ရပ်ကတော့ တကယ့်စံတင် စရာပါဘဲ။ လူသတ်၊ မိုင်းထောင်၊ လမ်း၊ တံတားတွေဖျက်စီး အတင်းအဓမ္မငွေတောင်း (ဒမြတိုက်မှု သာသာ) တွေပြုလုပ် ယုံတင် မကတော့ဘဲ လူတွေကိုပြန်ပေးဆွဲ၊ အတင်းအဓမ္မ သားမယားပြုကျင့်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ် နေပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ကလူတွေကလည်းကျေနပ်မှုတွေမရှိကြတော့ဘဲ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်ချင်ပေမယ့်လည်း သူတို့ရဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု သတ်ဖြတ်မှုကို ကြေ်လို့ ဘယ်သူမှမပြောရဲကြတော့ပါဘူး။ အခုလို အဓမ္မအတင်းသားမယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းမှုနဲ့ လူမှုရေး ကျူးလွန်မှုတွေအတွက် ပင်လုံရွာသားတွေက တိုင်တန်းဖို့ ကြိုးစား နေကြပြီး အစိုးရတပ် ကိုလဲကူညီမှုတွေပြုလုပ်ပြီး သူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနေ ပါတယ်လို့ ပင်လုံကျေးရွာမှ တိုင်းရင်းသူတစ်ဦးက KDN သတင်းဌာနသို့ သတင်းပေး ပို့လာပါတယ်။
ဖားကန့်မြို့တောင်ဘက် ၂၁မိုင်ခန့်အကွာ တွင်တည်ရှိသည့် တာမခန်ရွာသို့သွားရာ ဖားကန့်-တာမခန်လမ်းပေါ်တွင် စက်တင်ဘာ ၂၁ရက် နေ့လယ် ၁၁နာရီခန့်မှ စ၍ KIA နှင့် မြန်မာတပ်မတော်ကြား ပစ်ခက်တိုက်ခိုက်မှုအချို့ရှိခဲ့ရာ အဆိုပါလမ်း တစ်လျှောက်ရှိ ကျေးရွာများမှ ဒေသခံများမှာ ဖားကန့်မြို့နှင့် ဆက်လျက်ရှိသည့် ဆိုင်းတောင်ရွာနှင့် တာမခန် ရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့တိမ်းရှောင် နေကြကြောင်း ဖားကန့်မြို့နှင့် ဆိုင်းတောင်ရွာ ဒေသခံများထံမှ သတင်းရရှိသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၂ရက် နံနက် ၁၁နာရီဝန်းကျင်ခန့်က ဆိုင်းတောင်ရွာနှင့် ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာ၊ ဖားကန့် တာမခန်လမ်း အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသည့် ကသိုဏ်းတောင်တွင် လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခက်တိုက်ခိုက်သံ များကြားခဲ့ရပြီး ညပိုင်းတွင် တစ်ကြိမ်၊ ၂၃ရက် နံနက်ပိုင်းနှင့် ညပိုင်းအထိတိုက်ခိုက်သံများ ဆက်လက်ကြားခဲ့ကြောင်း၊
စက်တင်ဘာ ၂၄ရက်နေ့လယ် ၂နာရီအချိန်ခန့်တွင်လည်း ဆိုင်းတောင်ရွာမှ နှစ်မိုင် ခန့်ဝေးသည့် မှော်ရကင်တွင်လည်း တောင်ယာသွားသည့် ဒေသခံ ၃ဦး မိုင်းနင်းမိပြီး ဖားကန့်ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ထားရကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် ၄ရက်ခန့်မှစ၍ ဖားကန့်-တာမခန်လမ်းကို ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း၊ ဆိုင်းတောင်ရွာမှဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၂မှ ၂၄ရက် နံနက်အစောပိုင်းအထိ ကသိုဏ်းတောင်ကုန်းမှ ထွက်ပေါ် လာသော လက်နက် ကြီးလက်နက်ငယ် ပစ်ခက်သံ၊ တိုက်ပွဲသံများကြောင့် အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မှော်ရွာများမှ ဒေသခံများမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နေရာ၏ တစ်ဖက်ဆီတွင်
ရှိသည့် တာမခန်နှင့် ဆိုင်းတောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြကြောင်း ဖားကန့်ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။ “မော်မောင်းလယန်မှာ အလှူရှိလို့သွားကြတာ။ ပစ်ခက်တိုက်ခိုက်သံတွေကြားလို့ ပြန်ပြေး လာကြ တယ်” ဟု စက်တင်ဘာ ၂၂ရက်နေ့က ကသိုဏ်းတောင်အနီးရှိ မော်မောင်း လယန်ရွာသို့ အလှူပွဲသွားရောက်ခဲ့ သည့် ဖားကန့်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဆိုင်းတောင်ရွာအနီး မှော်ရကင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မိုင်းကွဲမှုနှင့် တိုက်ခိုက်သံများ ကြား ခဲ့ရခြင်းကြောင့် မှော်ရကင်နှင့် သုံးဖာလုံခန့်ဝေးသည့် နန့်မှော်ရွာမှ ဒေသခံများ ဆိုင်းတောင်ရွာသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်လာကြောင်း ဆိုင်းတောင် ရွာခံများ ထံမှ သိရသည်။ “စက်တင်ဘာ ၂၄ရက် ညနေ ၆နာရီမှာ ဆိုင်းတောင် ဆုတောင်းကုန်း ချက်ကျောင်းကို လူ၈၀နဲ့ ဆိုင်ကယ် အစီး၅၀ရောက်လာတယ်။ မော်ရကင်မှာ မိုင်းကွဲပြီး ကြောက်လို့ ပြောင်းလာကြတာတဲ့” ဟု ဆိုင်းတောင် ရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ ၄င်းဒေသတွင် အမြင်ဆုံးတောင်ဖြစ်သည့် က
သိုဏ်းတောင်တွင် တပ်ဆွဲထားသည့် မြန်မာတပ်မတော်ကို KIA တပ်များမှ နှစ်ဖက် ညှပ်တိုက်၍ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ လမ်းကြောင်း ပိတ်ထား၍အပျက်အဆီးအကျ အဆုံး မသိရကြောင်း ဖားကန့်နှင့် ဆိုင်းတောင်မှ ဒေသခံများမှ ပြောသည်။
အကြမ်းဖက်သမား ဖယ်ရှားဖို့ စီစဉ်
ရေစီစနစ် တိုးတက်လာရေးကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တားဆီးနှောင့်ယှက်နေတဲ့ မြောက်ကို ရီးယားနဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းလို ဒေသတွေက အစွန်းရောက်သမားတွေကို တကမ္ဘာလုံးက ညီညီညွတ်ညွတ်လက်တွဲပြီး ဆန့်ကျင် ကြဖို့ လိုအပ်တယ် လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကလင်တန်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ New York မြို့ မှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားရေး Clinton ရဲ့ ခင်ပွန်း သမ္မတဟောင်း Bill Clinton ရဲ့
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှေ့ဆောင် ဦးရွက်ရေး Clinton Global Initiative အဖွဲ့ ကြီး က ဦးစီးကျင်းပတဲ့နှစ်ပါတ်လည် နိင်ငံတကာ ဆွေးနွေးပွဲ မှာ သူမက ခုလိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Democracy ဆန့်ကျင်ရေးအစွန်းရောက်အင်အားစု တွေကို ဆန့်ကျင် သွားဖို့ ကျွန်မတို့ အားလုံး တညီ တညွတ်ထဲ ရပ်တည် ရင် ဆိုင် သွားကြဖို့ လိုပါတယ်။ မြောက်ကို ရီးယားနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူး ပြောင်းရေး ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ၀ိုင်းပြီး ထောက်ခံ အားပေးကြရပါလိမ့်မယ် လို့ ၀န်ကြီး Clinton က ပြောဆိုသွားပါတယ်။
အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု တွေကို ဆန့်ကျင်ရင်ဆိုင်ရာမှာ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး ညီညွတ် ကြဖို့ သိပ်ကိုအရေးကြီး ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာတလွှားက အစွန်းရောက်သမားတွေဟာ ကျွန်မတို့ အားလုံးအကွဲကွဲအပြားပြားနဲ့ ညီညွတ်မှု မရှိအောင် ကြိုးစားအားထုတ်နေကြလို့ပါဘဲလို့ သူမကသတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ်။
တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အားပေးတဲ့ အစိုးရနဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတွေထက် ကိုယ့်နိုင်ငံ စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ ၊ အစိုးရနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ကြီးတွေ ကောင်းမွန် ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ အဓိကထားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံ တွေက နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းမှာ ရှေ့ ကို တိုးတက် ရောက်ရှိ လာတယ် လို့လဲ ၀န်ကြီးClinton ကပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီရေးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်မှု တွေဟာ ကမ္ဘာတလွှား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွန်းကားနေပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အာဏာရှင်တွေအောက်မှာ ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးခွင့်ရနေပါပြီလို့ သူမကပြောဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အပြောင်းအလဲနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ တိုင်းပြည်တွေအနေနဲ့ သူတို့ စိတ်ကူးမြှော်မှန်းထားတဲ့ အကောင်း ဆုံးဒီမိုကရေစီရေး နမူနာတွေကို တကယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အစိုးရ တွေနဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံ့စီးပွားရေး တွေဖြစ်လာဖို့ ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး အကောင်အထည်ဖော် သွားနိုင်မလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ပါတ်လည် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးကို တက်ရောက်ဖို့ နိုင်ငံအသီးသီးက နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်လာကြချိန်မှာ သူတိုနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး အစည်းအဝေးတက်ဖို့ အတွက်အစည်း အဝေး ကျင်းပမဲ့ New York မြို့တော် ကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Clinton ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
လာမဲ့ ရက်တွေထဲ မှာနိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆော်င်တွေမိန့်ခွန်းပြောဆိုကြဖို့ ရှိပြီး အမေရိကန်သမ္မတ Barack Obama ကတော့ လာမဲ့ အင်္ဂါနေ့မှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ မိန့်ခွန်း ပြော ဆို မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အထွေထွေညီလာခံ ကြီးစပြီးကျင်းပတာနဲ့တပြိုင်နက် ဆီးရီးယားအရေးကတော့ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့  ဆွေးနွေးပြောဆိုမှု တွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့ အတွင်းရေးမှုးချုပ် Ban Ki Moon ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတ Obama ဒီနှစ်ပြောမဲ့မိန့်ခွန်းမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသက အပြောင်းအလဲတွေအကြောင်း အဓိကထားပြောဆိုဖို့ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက် ရိုက်ကူးတဲ့ အစ္စလာမ် ဆန့်ကျင်ရေးဗီဒီယို ကြောင့် မူဆလင် ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ပြောဆိုမယ်လို့ သိရပါတယ်။
မီးသုံးစွဲလိုသူနည်းသဖြင့် ကော့သောင်း ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ မလည်နိုင်သေး
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းမြို့တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ကော့သောင်းကျောက်မီးသွေးစက်ရုံအား ဒေသခံများ၏ မီးသုံးစွဲ အားနည်းသေးသည့်အတွက် စက်ရုံလည်ပတ်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း စက်ရုံမန်နေဂျာ ဦးလှမော်က ပြောကြားသည်။ ကော့သောင်းမြို့တွင် မြို့နယ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုပ်ငန်း (EPC )မှ ထုတ်လွှတ်သည့် မီးသုံးအားမှာ နေ့ဘက်တွင် ၅ဝဝ ကီလိုဝပ်ခန့် ရှိပြီး ညဘက်တွင် ၁ ဒသမ ၂ မဂ္ဂါဝပ် ခန့်ရှိသာ ရှိသည့်အတွက် ၈ မဂ္ဂါဝပ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံမလည် ပတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးလှမော် က ရှင်းပြသည်။ ”စက်က အနည်းဆုံး မီးသုံး အား ၃ မဂ္ဂါဝပ်နဲ့ ၄ မဂ္ဂါဝပ် လောက် သုံးအားရှိမှ ငြိမ်တာ။ အခုတော့ မီးသုံးအားက နည်းနေတော့ စက်ကို ထိန်းလို့မရဘူး”ဟု ဦးလှမော်က ဆိုသည်။ စက်ရုံ လည်ပတ်နေသော သန်းဖြိုးသူကုမ္ပဏီအနေနှင့် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ အဆိုပြုရန် လေ့လာစဉ် ကော့သောင်းမြို့၏ မီးသုံးအားသည် ၂ မဂ္ဂါဝပ် ခန့် ရှိသည့်အတွက် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်ခန့်တွင် ၅ မဂ္ဂါဝပ်ခန့်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းပြီး ၈ မဂ္ဂါဝပ် ကျောက်မီးသွေး ဓာတ် အားပေးစက်ရုံအား တည်ဆောက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးလှမော်က ရှင်းပြ သည်။ ကော့သောင်းမြို့တွင် ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်အားလိုင်း ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဝေသည့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း ၆ ခု၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် ၁ မဂ္ဂါဝပ်ခန့် ရှိပြီး ဖိုးသီးချိုမှ ဖြန့်ဝေနေသည် မှာ ၅ဝဝ ကီလိုဝပ်ခန့်ရှိမည်ဟု ဖိုးသီးချိုမှ တာဝန်ရှိသူက ခန့်မှန်း ပြောဆိုသည်။ ဖိုးသီးချိုမှာ ကော့သောင်းမြို့ တွင် ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့် လည်ပတ် ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးနေ သော ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဖိုးသီး ချိုကုမ္ပဏီ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ဖိုးသီးချိုကုမ္ပဏီမှ လျှပ်စစ်မီးဖြန့်ဝေခဲ့သည့် EPC မီတာနှင့် မီးလိုင်းများအား သန်းဖြိုးသူကုမ္ပဏီသို့ စက်တင် ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စပြီး လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် သန်းဖြိုးသူကုမ္ပဏီက ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံဝင်းအတွင်းရှိ မီးစက်နှစ်လုံး၊ EPC ဝင်းအတွင်းမှ ဖိုးသီးချိုကုမ္ပဏီပိုင် မီးစက်နှစ်လုံးဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စတင် ဖြန့်ဝေလျက်ရှိကြောင်း ဖိုးသီးချိုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောဆိုသည်။ ”ဒီလ EPC မီးလိုင်းမီတာခကို သန်းဖြိုးသူ ကုမ္ပဏီက ကောက်ပါ လိမ့်မယ်”ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ ကော့သောင်းကျောက်မီးသွေး စက်ရုံကို တည်ဆောက်ခဲ့သည့် သန်းဖြိုးသူကုမ္ပဏီမှ စက်တင်ဘာလမှစတင်ပြီး ဒီဇယ်ဖြင့် စတင်လည်ပတ်ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ် အား ဖြန့်ဖြူးနေပြီး တစ်ယူနစ်ဈေးနှုန်း ကျပ် ၃၇ဝ ဖြစ်ကြောင်း ဦးလှမော်ထံမှ သိရသည်။ ပုဂ္ဂလိက လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးများတွင် ဈေးကွက်ဝေစု အများဆုံး ဖြစ်သည့်ဖိုးသီးချို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဝေရေးလုပ်ငန်းမှ ကိုယ်ပိုင်မီတာ ကိုယ်ပိုင်မီးလိုင်းဖြင့် လက် ရှိ ဖြန့်ဝေနေသည့် ဈေးနှုန်းသည် ဒီဇယ်တစ်လီတာဈေးနှုန်း အတက်အကျကို မူတည်ပြီး ထိုင်းဘတ်ငွေဖြင့် ပေးချေရသည့်ဒေသအခေါ်”ဘတ်မီး”မီတာခသည် တစ်ယူနစ် လျှင် ကျပ် ၄၅ဝနှင့် ၅ဝဝကြားရှိသည်။ သန်းဖြိုးသူကုမ္ပဏီမှ လက်ရှိ ဒီဇယ်ဖြင့် ပေးနေသည့် ဈေးနှုန်းသည် ဖိုးသီးချိုကုမ္ပဏီထက် နည်းပါးသည့်အတွက် ပြောင်းသုံးသူရှိနိုင် သော်လည်း မီးပြောင်းသုံးလျှင် မီ တာပြောင်းရမည့် ကုန်ကျစရိတ် ရှိသည့်အတွက် လူတိုင်း ပြောင်းသုံးနိုင်မည်ဟု မထင်ကြောင်း EPC မီတာနှင့် ဖိုးသီးချိုမီတာ နှစ်ခုတွဲပြီး မျှသုံးနေသည့် ရွှေပြည်သာ ရပ်ကွက် နေဒေသခံတစ်ဦးကသုံးသပ်သည်။ ”ဈေးက အရမ်းမကွာဘူးဆို တော့ မပြောင်းနိုင်ဘူးထင်တာပဲ” ဟု ယင်းဒေသခံက မှန်းဆ ပြောဆို သည်။ သန်းဖြိုးသူကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အအေးခန်းလုပ်ငန်းများ၊ ရေခဲစက်များနှင့် ဝပ်ရှော့ရုံများတွင် မီတာတိုး ချဲ့နိုင်ရန်အဓိကထား ကြိုးစားမည်ဖြစ်ပြီး ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံလည်ပတ် နိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့ကုမ္ပဏီမီးလိုင်းအား သုံးစွဲသူများလာမည့်အချိန်ကို စောင့်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိဒီဇယ်ဖြင့် လည်ပတ်နေ ချိန်တွင် တစ်ယူနစ် ကျပ် ၃၇ဝ ဖြင့် အရှုံးခံပေးထား ကြောင်း ဦးလှမော်ကဖွင့်ဟသည်။ ”ကျောက်မီးသွေးနဲ့ လည်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ ၂ဝဝ ကျပ်နဲ့ ပေးမှာပါ”ဟု ဦးလှမော်ကပြောသည်။ သန်းဖြိုးသူကုမ္ပဏီမှ တည်ဆောက်သည့် ကော့သောင်း ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံအား လူနေရပ်ကွက်နှင့် ဆယ်မိုင်အကွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် ဒေသခံများက အကြိမ် ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီး စက်ရုံစမ်းသပ် လည်ပတ်ချိန်တွင် အသံဆူညံလွန်းခြင်း၊ ညှော်နံ့ပြင်းခြင်းကြောင့် ရပ်ကွက်နေလူထုများ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
အာဆီယံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ပွဲများကို အိမ်ရှင်အဖြစ် ထပ်မံကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂံမြို့တော်၌ အာဆီယံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးပွဲများကို ကျင်းပသွားရန်ရှိသည်ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့နှင့် ၂ ရက်နေ့တို့၌ အဆိုပါ အာဆီယံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးပွဲများကို ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် အာဆီယံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးအဆင့် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို လွှဲပြောင်းရယူထားသည့်အတွက် အစည်းအဝေးပွဲများကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပရခြင်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ် လက်ထက်၌ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အာဆီယံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးနှင့် အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝးကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလအတွင်း ကျင်းပမည့် အာဆီယံ ဆက်သွယ်ရေး သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးပွဲသည် ဝန်ကြီးအဆင့် ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကာလအတွင်း ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ထုတ် Internet Journal တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
စစ်တပ်က စစ်သားတွေရဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေကို ကြေငြာလေ့မရှိတဲ့အတွက် ကေအိုင်အေခေါင်းဆောင် တွေအနေနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်း စစ်တပ်ရဲ့ ထိခိုက်အကျအဆုံးကို ချဲ့ကာပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အကျအဆုံးကိုဖော်ပြရာမှာတော့ အမှန်တိုင်းဖော်ပြလေ့မရှိပါဘူး။ ကေအိုင်အေတပ်တွေဟာ စနစ် တကျ ဖွဲ့စည်းထားတာ မဟုတ်ဘဲ ရွာတွေက အတင်းအဓမ္မလူသစ်စု၊ သင်တန်းပေး၊ အတင်းတိုက်ခိုင်း လို့ ရှေ့တန်းမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ကေအိုင်အေတပ်တွေ ထိခိုက်ကျဆုံးအများအပြား ရှိနေပြီး အောက်ခြေက အခြေအနေတွေကို ကေအိုင်အေလူကြီးတွေ မသိတာဖြစ်နိုင်သလို မသိ ချင်ယောင်ဆောင်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကေအိုင်အေအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲခုခံတွန်းလှန်နေတယ်ပြောပြော စနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားပြီး ခေတ်မှီ လက်နက်တွေ အသုံးပြုနေတဲ့ စစ်တပ်ကို မယှဉ်နိုင်ပါဘူး။ ကာချုပ်ကြီးရဲ့ အမြော်အမြင်ရှိစွာ စစ်တပ်အပေါ် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့် လိုင်ဇာ၊ မိုင်ဂျာယန်နဲ့ လိုင်စင်ပို့စ် နေရာလေးလောက်ပဲ ကျန် ပါတော့မယ်။ ပစ်ခက်မှုစတင်ဖြစ်ပွားပြီး ကချင်ပြည်နယ် နယ်လုံဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူကြီးသန်းအောင်နဲ့ ကေ အိုင်အေဒုချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်တို့ ဆွေးနွေးကတည်းက သဘောတူညီထားတဲ့အတိုင်း လက်မှတ်ထိုးနိုင် ခဲ့ရင် ကေအိုင်အေစစ်သည်တွေလည်း အခုလို ထောင်နဲ့ချီပြီး သေစရာမရှိပါဘူး။
ဗမာစစ်သားတွေလည်း သေစရာအကြောင်းမရှိသလိုသူတို့ကိုမှီခိုပြီး နေရတဲ့သားမယား၊ ဆွေမျိုးတွေလည်း ဒုက္ခရောက်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ ဒေသခံပြည်သူတွေ သောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လည်း ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ နေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်သဘောတူပြီး လက်မှတ်ထိုးတော့မယ့် ဆဲဆဲ မှာ ကေအိုင်အေဘက်က မဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ အချက်တွေကို ထပ် ပြီး တောင်းဆိုလို့ အခုလို ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ စစ်ရဲ့အနိဌာရုံတွေကို ကြုံတွေ့နေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်ကတည်းက အပစ်အခက်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲရင် အခုလောက်ဆို ကေအိုင်အေ ဘက်က အမြဲပြောနေတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလည်း အတော်ခရီးရောက်နေပါပြီ။
အခုဆိုရင် ကေအိုင်အေနယ်မြေဟာလဲ လိုင်ဇာ၊ လိုင်စင်နဲ့ မိုင်ဂျာယန်နေရာလေးလောက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒါလည်းကာချုပ်အနေနဲ့ သဘောထားကြီးနေလို့သာ မတိုက်သေးပဲရှိနေတာပဲဖြစ်မှာပါ။ ကျန်နေတဲ့နေရာလေးတွေဘဲ ကေအိုင်အေအနေနဲ့ နယ်မြေသစ်ရဖို့ ပန်းဝါဘက်ကို နယ်ချဲ့ပေမယ့်လဲ NDAK တပ်ဖွဲ့တစ်ဖြစ်လဲ နယ်ခြားစောင့် တပ်တွေကြောင့် အထိအခိုက်အကျအဆုံးများခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကေအိုင်အေရဲ့ အခွန်ကောက်ရာမှောင်ခို လမ်းကြောင်းတွေကလည်း ပိတ်နေတော့ ၀င်ငွေ မရှိတော့ပါဘူး။ ကေအိုင်အေနယ်မြေထဲက သစ်တွေလဲ တရုတ်ကိုခိုးရောင်နေလိုကုန်နေပါပြီ။
အခုလဲ လိုင်ဇာမှာနေထိုင်နိုင်ဖို့ ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ဒုက္ခသည်စာရင်း သွင်းထားပြီး နိုင်ငံတကာအထောက် အပံ့နဲ့ အသက်ဆက်နေရပါတယ်။ ဒီလောက်တောင် ကချင်တစ်မျိုး သားလုံး ဒုက္ခရောက်နေတာကို ဘာကြောင့် ကေအိုင်အို လူကြီးတွေ ဒီတိုင်းကြည့်နေတာလဲ။ ကေအိုင်အေ အနေနဲ့ ၀မ်ပေါင်သမ္မတနိုင်ငံထူထောင်ချင်တာလဲ ဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
စစ်ရဲ့ဆိုးရွားလှတဲ့ ဒုက္ခတွေကို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်သားတို့ကလဲ အခုဆိုရင် ကာချုပ်ကြီး ဆီသူတို့ကို ပစ်မထားဖို့၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို အကာအကွယ်ပေး ဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ စာတွေလဲ အပြင်မှာ မကြာခဏတွေ့နေရပါပြီ။ ကေအိုင်အေတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးမလိုလားရတဲ့ အဓိကအကြောင်း အရင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကေအိုင်အေရဲ့ ရဲဘော်တွေအဆုံးအရှုံးခံ၊ ကချင်ပြည်နယ်ကြီး ထဲက တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုတွေကို ခုက္ခခံခိုင်းနေတာတွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ နောင်နှစ်ပေါင်း(၅၀)ကြာရင် မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ် တော့မယ့် တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ သံ/ သတ္ထုကြောကြီးက လိုင်စင်ပို့စ်အနီးမှာ ရှိတဲ့ အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကေအိုင်အေခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ရနိုင်သမျှအချိန်ဆွဲထားပြီး ကိုယ်ကျိုးစီပွားအတွက် အမြတ်ထုတ်လက်ဝါးကြီးအုပ်ချင်တဲ့ အရင်းရှင်စနစ်ဆိုးကို လက်ကိုင်ထားနေတယ် ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ အေအိုင်အေခေါင်းဆောင်တွေ ကိုယ့်ကျိုးစီးပွားပဲကြည့်နေသ၍ အပစ်အခတ်ရပ် စဲရေးဆိုတာ အလှမ်းဝေးနေအုံး မှာဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးမြှင့်ရန် ကိုရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေကြောင်း ကိုရီးယားအစိုးရပိုင် ကုန်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ရေး အေဂျင်စီ (KOTRA)၏ပြောကြားချက် ကို Korea Times သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အထည်အလိပ်၊စက်ရုံ၊ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစသောကဏ္ဍ၄ ခုနှင့်ပတ်သက်သော ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ၂၃ ခုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးချဲ့ရန်မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေဂျင်စီ(KOTRA)ကပြောကြားသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၌ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် စီးပွားရေးဖိုရမ်နှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတောင်ကိုရီးယားစီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် လည်းကောင်း တောင်ကိုရီးယား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်လည်းကောင်းတွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း KOTRA အဖွဲ့ကပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်လျက်ရှိသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားသော အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှု များကို ဖယ်ရှားပေးရန် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကစဉ်းစားလျက်ရှိသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေရုတ်သိမ်းဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။တောင်ကိုရီးယား စီးပွားရေး ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ခြေကုပ်ရသွားနိုင်ပါတယ်”ဟု KOTRA မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။
ထို့ပြင်ယခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် တောင်ကိုရီးယား ကုန်စည် ပြပွဲပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ကုမ္ပဏီ ၆၀ခန့်ပါဝင်ပြသမည်ဟုမျော်လင့်ကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့ကပြောကြားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် စိတ်ရောဂါသည်များကို အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းသည့် စက်ရုံတစ်ရုံကို တရားစွဲ
တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်း၌ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်း သူများကို မတရား ခိုင်းစေသော အင်္ဂတေ စက်ရုံ တစ်ရုံကို အာဏာပိုင် များက တရားစွဲဆို ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ စက်ရုံ၌ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းသူ များကို နံနက် ၆ နာရီမှ စတင်၍
အန္တရာယ် ရှိသော စက်များဖြင့် အလုပ် ခိုင်းစေလျက် ရှိကြောင်း၊ ၎င်းတို့အား အခြား အစားအစာ မပါသော ခေါက်ဆွဲများ ကိုသာ ကျွေးမွေး လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းစက်ရုံရှိ အချို့ အလုပ်သမား များမှာလည်း နားလေး၊ ဆွံ့အသူများ ဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့သည် သန့်ရှင်းမှု မရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်များ လုပ်ကိုင် နေရကြောင်း စက်ရုံသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ သည့် သတင်းထောက် တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက် အရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်း၌ မကြာသေးမီ ကာလများ အတွင်းကလည်း စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံ အချို့က စိတ်ဝေဒနာ ရှင်များ ကိုအလုပ် ခိုင်းစေရန် စက်ရုံများသို့ ရောင်းချမှုများ ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ တရုတ် အာဏာပိုင် များသည် အဆိုပါ စက်ရုံများကို ပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့် ထိရောက်စွာ နှိမ် နင်းခြင်း များကို စတင် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, September 25, 2012, under | No comments
ဖြစ်ပွားပုံကတော့ ကေအိုင်အေ အင်အား ၅၀ လောက်ရှိတဲ့အဖွဲ့ဟာ ဒွန်ဂန်ရွာထဲကို ညသန်းခေါင်းအချိန်မှာ တစ်အိမ်ကို ၃ ယောက်စီ ၀င်ရှာပါတယ်။ ယောကျာင်္းလေးတော်တော်များများ ကို ပါသွားပြီး စုစုပေါင်း ၁၂ ယောက် ကို KIA ရင်း ၁၁ ရှိတဲ့ဘက်ကို ခေါ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့အရင် ကတည်းက စုံစမ်းထားတယ်လို့ထင် ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့အဖွဲ့တွေ တက်ရှာတဲ့ အိမ်တွေက ယောကျာင်္းလေး အရွယ်ရောက်ပြီးသား တွေရှိတဲ့ အိမ်တွေပဲဖြစ်နေလို့ပါ။
အခုရွာမှာ ယောကျာ်းလေးမရှိသလောက်ကိုရှားနေပါပြီ။ အရေးအကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာပေါ်လာရင်တောင် အားကိုးအားထားရမယ့် ယောကျာ်းသား မရှိတော့ဘူး။ အဆိုးဆုံးကတော့ ကျောင်းတက်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်လာမယ့် ကျောင်းသားတွေပါသွားတာပါပဲလို့ ဒွန်ဂန် ရွာမှ အဖွားအိုတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင် ပဋိပက္ခ ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ တစ်ရပ် ကို လာမည့် နိုဝင် ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ထံ တင်ပြသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မျိုးမြင့်က ပြော သည်။ စက်တင် ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်က ချက်ထရီယမ် ဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည့် ရခိုင်ပြည် နယ် ဆိုင်ရာ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့၏ ပထမ အကြိမ် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ၄င်းကထို သို့ ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သော အခြေ အနေ များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် မှ စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက် များအား နိုင်ငံတော် သမ္မတ ထံသို့ တင်ပြနိုင် ရန် အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ တောင်ကုတ်၊ ကျောက်တော်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ စစ်တွေ နှင့် ရသေ့ တောင်မြို့နယ် များရှိ ကျေးရွာ များနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများသို့ စက်တင် ဘာလ ၇ ရက် နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိ သွားရောက် ကာ ရခိုင် တိုင်းရင်း သား များနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များအား သီးခြား စီ တွေ့ဆုံ မေးမြန်း မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ သီးခြားစီ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းရာ၌ နှစ်ဖက် စလုံးမှ အကြောက် တရားများ လွှမ်းမိုး၍ လုံခြုံရေး အခြေ အနေ မရှိမှု များ အား တင်ပြသည် များရှိသကဲ့သို့ ခွဲခြား ဆက်ဆံခံ ရမှု အခြေအနေ များအား တင်ပြသည် များလည်း ရှိကြောင်း၊ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် အနေဖြင့် ဒေသခံ များနှင့် တွေ့ ဆုံေ ဆွးနွေး ရာ မှ ရရှိသော အချက် အလက် များအား အခြေခံ စစ်တမ်းများ ကောက်ယူခဲ့ သည့်အပြင် ထိုစစ်တမ်း များ ပိုမို ခိုင်မာမှု ရှိစေရေး အတွက် သီးခြား သုတေ သနပြု အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကာ သုတေသနပြု စစ်တမ်း ကောက်ယူ လျက်ရှိကြောင်း၊ စုံစမ်းရေး ကော် မရှင်မှ ကွင်းဆင်း ကောက်ယူ ခဲ့သော အခြေ အနေများနှင့် သုတေ သန အဖွဲ့မှ ကောက်ယူ ရရှိခဲ့သော အခြေ အနေ ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း များကို ပေါင်း စပ်၍ ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အစီရင် ခံစာ တစ်စောင် ကို ရေးဆွဲသွား မည် ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် အတွင်း ရေးမှူး ဒေါက်တာ ကျော်ရင် လှိုင်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် အဆိုပါ အစီရင်ခံ စာအား နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ တင်ပြ ပြီးနောက် ပြည်သူများ သိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဟု ၄င်းက ဆိုသည်။ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မ ရှင် အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၁၈၂ ဦးနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ၂၁ဝ ကို မေးမြန်းနိုင်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွား ခဲ့သော အခြေ အနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ၄င်းတို့ ၏ သဘောထား၊ တွေ့ကြုံ ခံစားရ မှု အဖြစ်အပျက်များအပေါ် မူတည် ၍ စစ်တမ်း ကောက် ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်ဟု စုံ စမ်းရေး ကော် မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင် ဦးဇာဂနာ က ပြောသည်။ ၄င်းအပြင် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်မည့် အစီရင်ခံစာ မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ရှိစေရန် အတွက်သာ စီစဉ် ထုတ်ပြန် သွားမည် ဖြစ်သည့် အတွက် ရခိုင် တိုင်းရင်းသား များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း နေထိုင်သော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ အကြား ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခ ပြဿနာ များမှာ ပိုမိုကြီးထွား လာဖွယ် မ ရှိ ဟု ၄င်းက ထပ်မံပြောသည်။
ပထမဆုံးအမေရိကန်GE ကုမ္မဏီထုတ် ခေတ်မှီဂျက်လေယာ...
ရခိုင်သမိုင်းကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ အသေးစိတ် သ...
အယူသီးမှု နှင့် မေတ္တာတရား (အရှင်လတ်လတ်မြှုပ်နှံသင်္ဂြိ...
နိုင်ငံရေး အရှုပ်တော်ပုံကြောင့် တရုတ် ရဲချုပ်ဟောင်း...
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် အိမ်ထဲမှာ သံကြိုးခတ်ခြင်း ခံထာ...
စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာ...
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ ဆောက်လုပ်ဆဲ တံတားတစ်စင်းပြိ...
ဖားကန့်တွင် KIA ၏ လက်နက်ကြီးဒဏ်ကြောင့် ရွာသား(၃)ဦ...
KIA မှအတင်းအဓမ္မ ဖမ်းပြီးသားမယားအဖြစ်ပေါင်းမှုအား ပင...
မီးသုံးစွဲလိုသူနည်းသဖြင့် ကော့သောင်း ကျောက်မီးသွေး...
အာဆီယံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်...
တရုတ်နိုင်ငံတွင် စိတ်ရောဂါသည်များကို အတင်းအဓမ္မစေခိ...
မြစ်ကြီးနားမြို့အနီးတ၀ိုက်တွင် KIA မှ လူသစ်စုဖမ်းဆ...
ရခိုင်ပဋိပက္ခ အစီရင်ခံစာ နိုဝင်ဘာ ၁၆ တွင် ထုတ်ပြန်မ...